मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको रोजगारीमा आवेदन दिने आइतबारसहित ३ दिन बाँकी ! (भ्याकेन्सी नोटिससहित) – Artha Sarokar :: Nepal's No.1 Economic News portal.
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको रोजगारीमा आवेदन दिने आइतबारसहित ३ दिन बाँकी ! (भ्याकेन्सी नोटिससहित)
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकको रोजगारीमा आवेदन दिने आइतबारसहित ३ दिन बाँकी रहेको छ । इच्छुक आवेदकले साउन ६ गतेसम्म आवेदन दिईसक्नुपर्नेछ । बैंकले उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि विभिन्न ८ पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको थियो ।
बैंकले ब्राञ्च र रिलेसनशीप म्यानेजर, अप्रेशन र ट्रेड फाइनान्स इन्चार्ज, डिपोजिट म्यानेजर, लोन रिकोवरी र फिल्ड स्टाफ पदको लागि दरखास्त माग गरेको हो । जसमा ती पदहरुको लागि बैंकले सिनियर तथा जुनियर-सुपरभाइजर, अफिसर र असिस्टेन माग गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७८, आईतवार